Aqalka Sare oo wali ku eedeynaya Madaxweynaha inuusan xalin khilaafkii Labada Gole ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo ku dheeraaday khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka, kan Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka iyo midkii Golaha Shacabka iyo Xukuumadda, ayaa sheegay inuu Aqalka Sare kaalin weyn ka soo qaatay xalinta dhamaan Khilaafyadaas, laakiin uu Madaxweyne Farmajao ku guul dareystay inuu xaliyo Khilaafka Labada Gole ee Baarlamaanka.
“Wax jawaab celin ah kama aynaan helin” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi, isagoo ka hadlayey halka ay ku dambeysay u gudbintoodii Madaxweyne Farmaajo ee xalinta khilaafka Aqalka Sare kala dhaxeeya Golaha Shacabka. Waxa uu muujiyey in Madaxweynaha, oo arrinkaas dusha u ritay, uusan wali tilaabo u qaadin.
Waxa uu sheegay in markii ugu dhaweyd xalinta khilaafka Labada Gole leysku ogaa in ay Golayaasha Dowladdu soo kala magacawdaan guddiyo ku matali doona wada-hadal lagu xalinayo khilaafka, waxa uuna Guddoomiye Cabdi Xaashi sheegay in ay dhankooda soo magacaabeen guddigaas. “Hase ahaatee, Golaha Shacabka dhinacoodu wali sooma aysan magacaabin guddigii uga qeyb gali lahaa” ayuu yiri Cabdi Xaashi.
Isagoo jeedinaya khudbadiisii Xafladda Furitaanka Kalfadhiga 5-aad ee Golaha Aqalka Sare ayuu Guddoomiye Cabdi Xaashi sheegay inuu sikastaba Aqalku ka shaqeynayo xal u helista sidii ay si waafaqsan dastuurka ugu wada shaqeyn lahaayeen qaranka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare. “Waxaan ka shaqeeneynaa sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta dastuuriga ah ee Labada Aqal ee Baarlamaanka” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Reysal Wasaare Kheyre oo Aqalka Sare u sheegay in ay Soomaaliya la wareegeyso amaankeeda